Parizvino, kurwira kwenyika kurwisa mabayo kwakakonzerwa neruzivo coronavirus kwatanga. Se "mutsetse wekutanga" wekuchengetedza hutsanana, zvakakosha kupfeka mamask anosangana nedenda rekudzivirira. Kubva kuN95 neKN95 kusvika kumasikisi ekurapa ekurapa, vanhuwo zvavo vanogona kunge vaine mamwe mavara asingaone musarudzo yemask. Pano isu tinopfupikisa iwo ruzivo rwepfungwa mundima yakajairwa kuti ikubatsire iwe kunzwisisa iyo yakajairika pfungwa yemasikisi. Ndeapi matanho etsika?
Parizvino, zviyero zvakakura zvemunyika yangu zvemasikisi zvinosanganisira GB 2626-2019 "Yekufemera Yekuzvidzivirira Yayo-yega primitive Filtered Particle Respirators", GB 19083-2010 "Zvinodiwa zvehunyanzvi zveMishonga Inodzivirira Masiki", YY 0469-2011 "Kurapa Kuvhiya Masiki", GB / T 32610-2016 "technical Rondedzero yeMasikati Yekudzivirira Masiki", etc. GB 2626-2019 ″ Yekuzvidzivirira Yekuzvidzivirira Yega-Yakaomeswa-Inopemha Inopisa ”yakapihwa neHurumende Market Supervision Administration neNational Standardization Administration muna 2019-12-31. Iyo inosungirwa chiyero uye ichaitwa pane 2020-07-01. Zvinhu zvekudzivirira zvakatemwa neyakajairwa zvinosanganisira ese marudzi ezvinhu zvine chinhu, kusanganisira guruva, utsi, bvungapfunga nema microorganisms. Inotaridzirawo kugadzirwa uye hunyanzvi marongero emidziyo yekufema yekudzivirira, uye izvo zvinhu, chimiro, kutaridzika, mashandiro, uye kugona kwekutsvina kwemasikisi eguruva. (Guruva rekudzivirira mwero), kufema kuramba, nzira dzekuyedza, kuzivikanwa kwechigadzirwa, kurongedza, nezvimwe zvine zvidimbu zvinodiwa.
GB 19083-2010 "Zvinodikanwa zvehunyanzvi zveMishonga Inodzivirira Masiki" yakapihwa neyaimbova General Administration yeMhando yekutarisisa, Kuongorora uye Kuzviparadzanisa neNational Standardization Administration muna 2010-09-02 uye yakashandiswa muna 2011-08-01. Ichi chiyero chinodoma hunyanzvi zvinodiwa, nzira dzekuyedza, zviratidzo uye mirairo yekushandiswa kwemasikisi ekudzivirira ekurapa, pamwe nekurongedza, kutakura uye kuchengetedza. Iyo inokodzera kushandiswa mune yekurapa yekushandira nharaunda kusefa mweya unofefeterwa uye unodzivirira madonhwe, ropa, mvura yemumuviri, masevhisi, nezvimwe. 4.10 yemiyero inokurudzirwa, zvimwe zvese zvinosungirwa.
YY 0469-2011 "Chiremba Kuvhiya Masiki" yakapihwa neHurumende Zvinodhaka uye Kudya Kwekudya muna 2011-12-31. Iyo yakajairwa indasitiri yemishonga uye ichaitwa muna 2013-06-01. Ichi chiyero chinodoma hunyanzvi zvinodiwa, bvunzo nzira, mamaki uye mirairo yekushandisa, kurongedza, kutakura uye kuchengetedza masiki ekurapa ekurapa. Iwo muyero unotaura kuti hutachiona hwekunatsa kusefa kwemasikisi haufanire kunge uri pasi pe 95%.
GB / T 32610-2016 "Tsananguro dzehunyanzvi dzeMasikati Ekudzivirira Masiki" yakapihwa neyaimbova General Administration yeHurumende Kutarisirwa, Kuongorora uye Kuzviparadzanisa neNational Standardization Administration pa2016-04-25. Iyi ndiyo nyika yangu yekutanga yenyika masks anodzivirira, pa2016-11 -Kuzadzikiswa pa01. Iyo mwero inosanganisira masiki mbishi zvinhu zvinodiwa, zvimiro zvedanho, chitupa chiziviso chinodiwa, kutaridzika zvinodiwa, nezvimwe. Zviratidzo zvikuru zvinosanganisira zvinoshanda zviratidzo, kusefa kwecheturu. kugona, kufema uye kukurudzira kurwisa zviratidzo, uye kunamatira zviratidzo. Chiyero chinoda kuti masiki anokwanisa kugona zvakachengeteka uye akasimba kuchengetedza muromo nemhino, uye hapafanire kuve nemakona akapinza nemakona anogona kubatika. Iyo ine yakadzama mirau pazvinhu zvinogona kukonzera kukuvadza kumitumbi yevanhu, senge formaldehyde, dhayi, uye microorganisms, kuona kuti veruzhinji vanogona kuzvipfeka. Kudzivirirwa kana wakapfeka masiki ekudzivirira.
Yekutanga masks eK95. Zvinoenderana nekupatsanurwa kweiyo standard yenyika GB2626-2019 "Yekufema Yekuzvidzivirira Yega-priming Filtered Particle Respirator", masiki akapatsanurwa kuita KN neKP zvinoenderana nehunyanzvi hwechikamu chesafa chinhu. KP mhando inokodzera kusefa oily particles, uye KN mhando inokodzera kusefa isina-oiri zvikamu. Pakati pavo, iyo KN95 maski painowanikwa ine sodium chloride particles, kugona kwayo kusefa kunofanirwa kuve kwakakura kupfuura kana kuenzana ne95%, ndiko kuti, kugona kwekusefa kweasina mafuta oiri pamusoro pe0.075 microns (median dhayamita) yakakura kupfuura kana yakaenzana kusvika 95%.
Iyo 95 mask ndeimwe yeiyo pfumbamwe inodzivirira masiki ekudzivirira anozivikanwa neNIOSH (National Institute of Occupational Safety uye Hutano). "N" zvinoreva kusapikisa mafuta. "95 ″ zvinoreva kuti kana ikaburitswa kune yakatarwa nhamba yezvakakosha bvunzo, iko kusungwa kwemukati mukati mechifukidzo kunodarika 95% kuderera pane iko kusungwa kwemukati.
Uyezve kune masiki ekuvhiya ekurapa. Zvinoenderana netsananguro yeYY 0469-2019 "Medical Medical Masks", masiki ekuvhiya ekurapa "akapfekedzwa nevashandi vezvekurapa munzvimbo isina kushanda yekupa kuchengetedza varwere vanorapwa uye vashandi vezvekurapa vanoita kuvhiya, kudzivirira ropa, Masiki ekuvhiya ekurapa. anoparadzirwa nemvura yomumvura uye mapfapfaidzo masiki anopfekwa navanoshanda pabasa. ” Rudzi urwu rwemaski runoshandiswa munzvimbo dzekurapa dzakadai semakiriniki ekurapa, marabhoritari, nemakamuri ekuvhiya, uye rakakamurwa kuita dura risingapinde mvura, firita rukoko, uye nhurikidzwa yekunyaradza kubva kunze kusvika mukati.
Sarudza masiki nesainzi.
Nyanzvi dzakataura kuti pamusoro pekupa dziviriro inoshanda, kupfeka chifukidzo kunofanira zvakare kufunga kunyaradzwa kweanopfeka uye kwete kuunza zvakashata senge njodzi dzehupenyu. Kazhinji kutaura, iko kumusoro iko kwekudzivirira kwekuita kwemask, kwakanyanya kukanganisa mukuita kwekunyaradza. Kana vanhu vakapfeka chifukidzo uye vachifemesa, iyo masiki ine kumwe kumisidzana nekuyerera kwemhepo. Kana inhalation kuramba kwakanyanya, vamwe vanhu vanozonzwa dzungu, kuomesa pachipfuva uye zvimwe kusagadzikana.
Chekupedzisira, ini ndinoyeuchidza munhu wese kuti zvisinei nemhando ipi yemask, iwe unofanirwa kuibata zvakanaka mushure mekushandisa, kuti urege kuzova sosi nyowani yehutachiona. Kazhinji gadzirira mamwe masiki mashoma uye oatsiva iwo nenguva yekuvaka yekutanga tambo yekudzivirira kuchengetedza hutano. Ndinoshuva imi mose utano hwakanaka!
Post nguva: Jan-01-2021
Sterilized Cotton Swab, Antiviral Mask, Mhepo Inofema, Inoraswa Medical Chiso Mask, Nursing Pad, Chiremba Cotton,